Chiitiko cheVashanyi muSamoa: Samoa's Teuila Festival
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Kufamba Nhau » Chiitiko cheVashanyi muSamoa: Samoa's Teuila Festival
Nhau Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • Samoa Kuputsa Nhau • Kufamba Wire Nhau
Kubva payakavambwa muna 1991, Mutambo weTauila weSamoa wakura kuita imwe yemhemberero dzegore negore dzeSamoa uye mumwe wemitambo mikuru yemaSouth Pacific.
Joinha mhemberero sezvo Samoa inova inzvimbo yetsika yeSouth Pacific uye inopemberera zvinhu zvese Samoan panguva yeMutambo weTeuila! Mhemberero yechokwadi yetsika dzevaSamoa nevePolynesia, uyu mutambo chiitiko chegore negore izvozvi mugore rayo rechimakumi maviri nemasere, zviine zviitiko zvakawanda uye zviratidziro zviri kuitirwa nyika yese, kunyanya muApia, guta guru reSamoa.
Mutambo uyu unodanwa nezita rekupenya red tsvuku teuila ruva, ruva rwenyika rweSamoa uye inowanzoonekwa kutenderedza zviwi. Mutambo wegore rino uchange uchitanga kubva pa2 kusvika 8 Gunyana. Vashanyi vanozoona yekutamba yeSamoan, hunyanzvi, gastronomy uye kunyangwe echinyakare nyora.
Gore rega rega zviuru zvinodururira kuguta guru kuti vaone iyo extravanganza unova iwo Mhemberero Yokuzarura, inoitwa gore rino musi wa2 Gunyana. Kuvhura kuratidzwa kwekudada kwetsika yeSamoa ine maruva parade, vatambi vemoto weSiva Afi uye mimhanzi yechizvarwa kumisikidza chiitiko chemamwe mazuva mashanu emafaro emafaro. Chimwe chiratidziro chinokatyamadza ndecheMukuru weFiafia show, uko madhizaini anoyevedza uye varaidzo zvinomiririra tsika yetsika dzakasiyana dzeSouth Pacific Islands.
Mhemberero iyi ine zvakawanda zvakachengeterwa avo vanofarira kutamba mune zvekugadzira zvinhu, nehunyanzvi nehunyanzvi hwekuratidzira zvichipa mukana wekutora muzvidzidzo zvechinyakare zvekuruka, kuveza huni uye makwikwi e cocktail, anoitika mazuva ese kuSamoa Cultural Village. . Vashanyi vanogona zvakare kuona hunyanzvi hwakareba hwekunyora nyora nzira yeSamoa, hunyanzvi hwakatambidzwa kubva kuchizvarwa kuenda kuchizvarwa kugadzira zvakasarudzika semurwi-senge dhizaini. Vanoda chikafu vanozowana kudaidzwa kwavo pakati pezvitoro zvakawanda zvekudya zvinoshandira nzvimbo dzekuSamoa uye kuratidzira kweUmu neChitatu kuchaona chikafu chakapihwa kubva muovheni yepasi pevhu kupa vanhu vazhinji.
Kune zvimwe zviitiko zvakawanda uye zviitiko zviri kuitika muvhiki rese kusanganisira iyo Police Band Mureza Kurera Parade, iyo Yakanyanya yeSamoa show, Miss Samoa Pageant uye iyo Teuila Movie muPaza. Sezvo mutambo unoswedera kumagumo, vashanyi vanokurudzirwa kuti vauye kumhemberero yekupa mibairo yepamutemo kuzokudza vese vakapinda muvhiki. Kuti uwane rumwe ruzivo nezve Samoa uye iyo Teuila Mutambo, shanya www.samoa.travel.